News - SMC ịkpụzi ogwe akụrụngwa uru na ngwa
mejupụtara haịdrọlik pịa
Deep ịbịaru haịdrọlik pịa
Ntụ ntụ akpụ haịdrọlik pịa
Automatic mmepụta akara
Door embossing haịdrọlik pịa
Oyi ibelata haịdrọlik pịa
Hot ibe ya bụrụ Hydraulic Press
CNC ekwe igwe
VR Factory njem
SMC ịkpụzi akpaka ogwe uru na ngwa
SMC mkpuchi akụkụ ụgbọala nwere uru nke nkwụsị nkwụsị, ịka nká, nhicha dị mfe, ịdị arọ dị mfe, modulus na-agbanwe agbanwe, wdg, ma bụrụ nhọrọ kachasị mma maka akụkụ mkpuchi ụgbọ ala. Automobile ekpuchi akụkụ (nke ugbu a na-ezo aka dị ka akụkụ mkpuchi) na-ezo aka n'akụkụ ụgbọ ala nke mejupụtara ihu na ime nke ahụ pụrụ iche nke ahụ ụgbọ ala ma ọ bụ cab, na-ekpuchi injin na chassis.
Ihe mkpuchi ụgbọ ala SMC abụghị naanị akụkụ a chọrọ mma, kamakwa akụkụ mechiri emechi-dịka akụkụ siri ike. Nrụpụta nke ikpuchi akụkụ bụ njikọ dị mkpa na imepụta ozu ụgbọ ala. Obere ntụpọ ọ bụla n’elu mkpuchi ga-eme ka mgbuke ọkụ nke ìhè mgbe eserese ma mebie ọdịdị ahụ. Ya mere, a naghị ekwe ka elu mkpuchi SMC nwee ripple, wrinkles, akara eserese na ntụpọ ndị ọzọ na-ebibi aesthetics nke elu.
Ihe omumu sayensi na imeputa ihe gosiputara na ihe SMC bu ezigbo ihe eji emeputa uzo ohuru. .SMC Auto Parts Iji nweta ihe zuru ụwa ọnụ akpakanamde fechaa mkpa, SMC mejupụtara ihe nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, mfe akpụ, mgbanwe, corrosion eguzogide na na.
Ka ọ dị ugbu a, igwe na-akpụzi Chengdu ZHENGXI Hydraulic Equipment ụlọ ọrụ nwere ike ịkpụzi akụkụ SMC: akpa ọnụ ụzọ SMC, bọmbụ SMC, ogwe ọkụ, oghere ihu ihu SMC, nnukwu ọkwọ ụgbọ ala SMC, ihu etiti etiti, SMC bompa, SMC mask, Ikuku deflector, A ogidi, SMC engine soundproof cover, SMC batrị mgbodo, n'okpuru nchedo mkpuchi, SMC fenda, SMC fenda, ngwá panel etiti, SMC ibu shelf na ndị ọzọ na mmiri.
Post oge: Apr-09-2021
Nweta akụkọ kacha ọhụrụ na US
Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 45,608, gụnyere mpaghara ogbako dị arọ nke 30,400 square mita. Ọ bụ ọkachamara buru ibu [...]
Nke 1698, Zhihui Avenue, Mpaghara Qingbaijiang, Chengdu China.